Nanshwepyi.com - No.1 Real Estate Application Website in Naypyitaw, Myanmar
Type အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား ဆိုင်ခန်း တစ်ထပ်အိမ် အထပ်မြင့် မြေကွက် နှစ်ထပ်အိမ်
State မြို့ နယ် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ပျဉ်းမနားမြို့နယ် လယ်ဝေးမြို့နယ် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ဇေယျာသီရိမြို့နယ်
City ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ ၀ဏ္ဏဒီပ ဇ၀နသိဒ္ဓိ မင်္ဂလာဒီပ ရတနာသိဒ္ဓိ သပြေကုန်း ပေါင်းလောင်း ရွှေအင်ကြင်း(၂) ရွှေကြာပင်
Status ရောင်းရန်/ငှားရန် Featured ငှားရန် ရောင်းရန်
Beds အိပ်ခန်း2345713
Price From ( Lakhs) ဈေးနှုန်း(သိန်း)အနည်းဆုံး မှ
Price To ( Lakhs) ဈေးနှုန်း(သိန်း)အများဆုံး အတွင်း
Property ID ကြော်ငြာ ID နံပါတ်ဖြင့်ရှာဖွေရန်
-နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ဇ၀န သိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ မြေအကျယ်(100×100)ပေ၊ မာစတာ(၂)၊ ရိုးရိုး(၂)၊ ဘုရားခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊ စာကြည့်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ 1RC (80%)၊ သော်က 13 လမ်း၊ မန္တလေးလမ်းမကြီး အနီး၊...
Lot Size100ft x 100ft
-သော်ကလမ်းမေးတင် မြေကွက် ရောင်းမည်
-နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်၊ မြေအကျယ်(60×60)ပေ သော်ကလမ်းနှင့်မလိခလမ်းထောင့် ထောင့်ကွက်၊ (ရှေ့+တောင်)လှည့်၊ မြေညီ၊ အုတ်တံတိုင်းတစ်ဖက်ပါ၊ ပါမစ်မြေ၊ နေရာကောင်း ရောင်းပါမည်။ ဈေးနှုန်း – 530 သိန်း ID – 101428...
Lot Size60ft x 60ft
-နေပြည်တော်၏ မြေကျယ်ကျယ် နေရာကောင်း
-နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ မြေအကျယ်(100×100) ပေ(၂)ကွက်တွဲ၊ 200×100 ပေ ထောင့်ကွက်၊ အုတ်တံတိုင်း ပါတ်ကားခတ်ပြီး၊ အရှေ့+တောင်လှည့်၊ မင်းသီးကကဖေး၊ ဗေ့ဗေ့မောင်ဆည်နှင့်တော်ဝင်ရတနာလမ်းမကြီးအနီး နေရာကောင်း ဂရန်မြေရောင်းပါမည်။ ဈေးနှုန်း – 3500 သိန်း ID...
Lot Size200ft x 100ft
အသင့်နေ တိုက်ကောင်း နေရာကောင်း
-နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ရာဇသင်္ဂဟအိမ် ရာ(၂)၊ ရတနာသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ မြေအကျယ်(100×100) ပေ၊ 1RC၊ ဘုရာခန်းသီးသန့်၊ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)၊ ရိုးရိုး(၃)၊ ဧည့်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ကြွေပြားခင်း၊ Sqft (2000)၀န်းကျင်ရေ၊ မီး၊ အပြည့်အစုံ၊...
အသင့်နေ မြေကျယ်ကျယ် 2ထပ်တိုက်
-နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ဇ၀နသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ မြေအကျယ်(100×100)ပေ၊2အာစီ အောက်ထပ် – ဧည့်ခန်း၊ ရိုးရိုး (1) ၊ မီးဖို + ထမင်းစားခန်း အပေါ်ထပ် – ဘုရားခန်း၊ မာစတာ...
-နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက် ချယ်ရီလမ်းအနီး၊ မြေအကျယ်(80×80)ပေ၊ တစ်ထပ်တိုက်ပါ၊ ခြံစည်းရိုးခတ်ပြီး၊ ထောင့်ကွက် ရေ မီးအပြည့်စုံ ဘူတာကြီးအနီး နေရာကောင်း ရောင်းပါမည်။ ဈေးနှုန်း – 400 သိန်း ID –...
Lot Size80ft x 80ft
-နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ လူနေစည်ကားပြီး အချက်အချာကျသောမြို့မဈေးတွင် နှစ်ထပ်ပွဲရုံတန်း ဆိုင်ခန်း ၂ ခန်းတွဲ ထောင့်ခန်းပါ ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ ဈေးနှုန်း – 1800 သိန်း ID – 102112 Contact Us...
နေပြည်တော်မြို့လယ် 60×80 သိန်း 580
-နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ဟိုတယ်ဇုန်အရှေ့ရပ် ကျောက်မျက်အချောထည်ဈေးရှေ့၊ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်အနီး၊ မြေအကျယ်(40×60)ပေ၊ ၂ကွက်တွဲ 60×80 ပေ၊ ရှေ့+နောက် လမ်း ၂ဖက်ပေါက်၊ ဟိုတယ်ဇုန်အနီး၊ ထန်းတပင် VIP ရပ်ကွက်အတွင်း နေရာကောင်း ပါမစ်မြေ ရောင်းပါမည်။ ဈေးနှုန်း...
Lot Size60ft x 80ft
-နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်၊ မြေအကျယ်(60×60)ပေ၊ ရေတမာ ၄လမ်းနှင့် မြစ်ငယ် ၂လမ်းထောင့်ကွက် အရှေ့+မြောက်လှည့်၊ မြစ်ငယ် လမ်းမကြီးအနီး၊ ပါမစ်မြေ ရောင်းပါမည်။ ဈေးနှုန်း – 260 သိန်း ID –...
VIP ရပ်ကွက်အနီး ထောင့်ကွက်အရောင်း
-နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်၊ မြေအကျယ်(60×60)ပေ၊ ထောင့်ကွက်၊ အုတ်တံတိုင်း ခတ်ပြီး၊ ရှေ့+တောင်လှည့်၊ ချင်းတွင်းလမ်းအနီး၊ ထန်းတပင် VIP ရပ်ကွက်အနီး၊ ၀ယ်ယူသူအမည်ပေါက် ဂရန်လျှောက်ထားနိုင်သောပါမစ်မြေ နေရာကောင်း ဈေးနှုန်း – 320 သိန်း...
ဧရာဝတီလမ်းအနီး 40×60 ၂ကွက်တွဲရောင်းပါမည်
-နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ မြေအကျယ်(40×60)၂ကွက်တွဲ၊ 80×60ပေ အရှေ့လှည့် မြေမြင့်၊ ဧရာဝတီလမ်းမကျောက်ကပ်၊ ကံကော်လမ်းမ အနီး၊ ၀ယ်ယူသူအမည်ပေါက်ဂရန်လျှောက်ထားနိုင်သော ပါမစ်မြေ နေရာကောင်း ရောင်းပါမည်။ ဈေးနှုန်း – 200 သိန်း ID...
Lot Size40ft x 60ft
စက်မှုဇုန်အနီး RC အကြမ်းထည် (300)သိန်း
-နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေအင်ကြင်း(၂) မြေအကျယ်(60×60)ပေ၊ 1RC(80%), မာစတာ(၂)ခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း+မီးဖိုခန်း၊ Sqft(1500)၀န်း ကျင်၊ မြောက်လှည့်၊ ရောင်းပါမည်။ ဈေးနှုန်း – 300 သိန်း ID – 102182...
-နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်၊ မြေအကျယ်(60×60)ပေ၊ အုတ်တံတိုင်းခတ်ပြီး၊ မြေညီ၊ ချင်းတွင်းလမ်းကျောကပ်၊ စိန်ပန်းပြာလမ်းမအနီး၊ ရွှေကြာပင်မီးသတ်အနီး၊ အနောက်လှည့်၊ ရောင်းပါမည်။ ဈေးနှုန်း – 420 သိန်း ID – Contact Us...
-ဒက္ခိဏသီရိ ဈေးတန်လုံးချင်းတိုက်အရောင်း -နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ မြေအကျယ်(80×80)ပေ၊ မာစတာ(၁)၊ ရိုးရိုး(၂)၊ ဧည့်ခန်း၊ ဘုရားခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ကျွန်းပါကေးခင်း၊ အိမ်အကျယ် Sqft (2000)၀န်းကျင်၊ မြောက်လှည့် ပရိဘောဂ၊ ရေ၊ မီး၊ အပြည့်အစုံ၊...
-နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ဟိုတယ်ဇုန် အရှေ့ရပ်၊ ကျောက်မျက်အချောထည်ဈေးရှေ့၊ ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်အနီး၊ မြေအကျယ်(100×100)ပေ ထောင့်ကွက်၊ အုတ်တံတိုင်း ၁ဖက်ပါ၊ ခြံစည်းရိုးခတ်ပြီး ထောင့်ကွက်၊ အဆောက်အဦအသေး(၁)ခုပါ၊ အရှေ့+ တောင်လှည့်၊ တော်ဝင်ရတနာလမ်းမကြီးကျောကပ် VIP ရပ်ကွက်အတွင်း နေရာကောင်း...
နေပြည်တော် မြို့နယ်စုံရှိ ရောင်း/၀ယ်/ငှားရမ်းရန်အိမ်ခြံမြေများကို လျှင်မြန်ထိရောက်စွာ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်စေရန်အတွက် -တိကျသေချာသော Data Management System၊ Application Website, Mobile Apk များအားကိုယ်တိုင် ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားပြီး -ထိရောက်သော Marketing & Digital Marketing နည်းပညာများကိုအသုံးပြု၍ -စစ်မှန်သော စေတနာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုများကို ပေါင်းစပ်ကာ ဥပဒေနှင့်အညီ မှန်ကန်ခိုင်မာစွာဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ Nanshwepyi Real Estate '' Excellent Realty Partner ''
09 5085600, 09 5143040, 09 5153390
NANSHWEPYI Facebook Page
www.NANSHWEPYI.com isareal estate web portal in Naypyitaw City, Myanmar. Copyright © 2019 NANSHWEPYI.com. All Rights Reserved. . Back to top